इँटा उद्योग र वातावरण | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण इँटा उद्योग र वातावरण
on: २० मंसिर २०७५, बिहीबार ०५:१६ लेख | दृष्टिकोण
इँटा उद्योग र वातावरण
राजधानीबाट लगभग ३० किलोमिटर पर पश्चिमतिर इँटा उद्योग छ । इँटा पकाउन कोइला जलाउँदा निस्कने धूवाँबाट वातावरण प्रदूषण भएको छ । तर, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ का अनुसार वातावरणीय प्रभावको परीक्षण नगरी उद्योग स्थापना नै गर्न पाइँदैन ।
इँटा पोल्न कोइला बालिन्छ । त्यो आगो बल्न चिम्नीको फेदमा पम्पसेट चलाएर बलिरहेको इँटाको वरिपरि अक्सिजन पठाइन्छ । जब एकतिरको इँटा पाक्छ अश ती प्वाल बन्द गरेर अब काँचो इँटातिर कोइला फाल्न थालिन्छ । बालुवा राखेर भित्रको तातो बचाउने र बाहिर तातोबाट बच्न बालुवा र माटो भर्ने कामलाई झोकाइ भनिन्छ । यसरी इँटा भर्ने पोल्ने, त्यसलाई १५ देखि १७ दिनसम्म चिसो बनाउने अनि निकाल्ने कामको चक्र चलिरहन्छ ६–७ महीनासम्म । यसरी विश्वका ठूलाठूला शहरका भवनहरू निर्माण गर्ने इँटा निर्माणको चक्र चल्छ । यहाँ श्रम विभाजन, अनुशान, समय व्यवस्थापन ज्यादै नै आकर्षक तरीकाले चलिरहेको हुन्छ । इँटाभट्टा राष्ट्र निर्माणको सानो एकाइ हो र विशाल संरचनाको आधार एकाइ हो । तर, यसको चिम्नीबाट आउने धूवाँ कत्तिको हानिकारक छ ? कस्तो प्रविधिको इँटा उद्योगबाट कति खराब धूवाँ आउँछ ? भन्ने विषय नितान्त प्राविधिक कुरा हो । त्यो धूवाँबाट निस्कने कालो वा अन्य खराब धूलोका कणहरूले मानव स्वास्थ्यलाई असर पार्छ भने हामी सबै सतर्क हुनैपर्छ । धूवाँधूलोलाई बेवास्ता गर्ने तर उद्योग स्थिर भएकाले यसबाट केही सुविधा पाइयोस् भन्ने आशा पनि वरिपरिका मानिसले राखेका हुन्छन् । त्यसैले सबैले वातावरण ऐन २०५३ को मानक र मापदण्डको अनुपालन गर्नुपर्छ ।
त्यो इँटाभट्टाबाट निस्कने धूवाँ कति हानिकारक छ भनी वातावरणीय परीक्षण गर्न कारखानाका तर्फबाट प्राविधिक टोली गएको थियो । ५०–६० जना स्थानीय पनि जम्मा भएका थिए । उनीहरूका मिश्रित माग थियो । एकपक्षले हाम्रो वडालाई ४ कोठा बनाउन पुग्ने इँटा अरूलाई भन्दा कम रू. ११ प्रतिगोटा दिनुपर्छ भन्ने माग राखे । अर्कोले यो भट्टाले गर्दा हाम्रो वरिपरि खेतमा धानको उब्जनी कम भयो, हामीलाई क्षतिपूर्ति चाहियो भने । भट्टाले गर्दा माथि वनका सालका पात काला भए टपरी खुट्न पनि नमिल्ने भयो भन्ने अर्काथरी थिए । सबैका आआफ्ना प्रकारका माग र आशा थिए । तर, उनीहरूले भने जस्तो जताततै कालो देखिएको थिएन । असोज महीनाबाट वर्षात् नभएकाले सालको पात र धानको पातमा बस्ने कालो जमीनमा पनि झरेको हुनुपर्ने त्यस्तो केही थिएन ।
अहिले जुन परीक्षण भइरहेको छ त्यसले जस्तो रिपोर्ट दिए पनि यो उद्योगीकै तर्फबाट आएका परीक्षणकर्ता हुन् । यिनीहरूले त्यहाँ जस्तो रिपोर्ट आए पनि टाइप गर्ने बेलामा राम्रो बनाएर ल्याउनेछन् । त्यसैले हाम्रा माग पूरा नभए हामी ताला लगाउँछौं । उद्योग बन्द गरिदिन्छौं भन्ने स्थानीयको भनाइ थियो । त्यो वडाका वडाध्यक्षले वडाको सिफारिश लिएर आएका त्यो वडाका सबैलाई बढीमा ४ कोठासम्मको घर बनाउन पुग्ने इँटा रू. ११ मा दिनुपर्ने माग जायज भएको बताए । वडा अध्यक्ष पदका पराजित उम्मेदवारले हाम्रो धान मकैमा यो धूवाँले असर गर्छ, कालो गएर पातमा टाँसिन्छ यसले गर्दा घामको ताप पातमा राम्ररी जान पाउँदैन अनि धानमा पपटा बढी भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति नदिएसम्म उद्योगमा ताला लगाइन्छ भने । यो हो होइन भनी नजीकैको धानको खेतको धानका पात हेरेको त्यसरी माथि देखिने गरीे कालो पात तथा जमीन कतै थिएन । उद्योगको नजीकैचाहिँ केही सानो छिर्का कालो खसेको देखियो । मेशिनले ध्वनिप्रदूषण गरेको पनि सुनिएन । माटाको धूलोचाहिँ उडेको थियो ।
सबैले आआफ्नो तरीकाले माग राखे पनि एक जना कान्छा भण्डारीको भनाइअनुसार त्यो चिम्नीबाट निस्केको धूवाँलाई ठूलो पाइपबाट फेरि जमीनमा ल्याएर ठूलो पोखरीको पानीमा छाड्ने हो भने त्यसको कालोपन र विषादी सबै पानीमा जम्मा हुन्छ । बाँकी शुद्ध ग्यासमात्र बाहिर आउँछ । उद्योग रोक्न भएन, जनताको जायज मागलाई सम्बोधन नगरी पनि भएन । तसर्थ त्यो विधि उपयुक्त हो भन्ने धेरैको भनाइ थियो ।
व्यवसायीको सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ । यसअन्तर्गत जनगुनासाका सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, २–३ किमीपरका मानिसले पनि हामीलाई असर गर्‍यो भन्न थालेपछि उद्योगले के गर्न सक्छ र ? सबैले सबैचीज यही उद्योगले गर्दा बिग्रियो भन्न थाल्ने हो भने देशको विकास कसरी होला ? गाउँले भन्छन्– ठिक्क धान फुल्ने बेलामा गुवोमा शीत पर्नुपर्नेमा धूवाँ पर्‍यो । वातावरणविद् भन्छन्– माथि गएको धूवाँले त्यसरी धान खराब गर्ने भए नेपालमा धान नहुनु पर्ने किनकि हरेक ४–५ किलोमिटरमा कुनै न कुनै इँटाभट्टा हुन्छ नै ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार वातावरण निरीक्षकहरूले कुनै उद्योगबाट निस्कने प्रदूषणले त्यहाँको बालीनाली, व्यक्तिलगायत अन्य केही कसैलाई असर गरेको छ छैन वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण गर्नुपर्छ । परीक्षणमा प्राप्त प्रतिवेदन सम्बन्धित विभाग वा मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्छ । निरीक्षण गर्दा कसैले निरीक्षकलाई बाधा अवरोध वा प्रभावमा पार्ने काम गर्नु हुँदैन ।
यही प्रक्रियाअनुसार त्यो कारखानाको परीक्षण भएको छ । त्यसको प्रतिवेदन कस्तो आउँछ प्रयोगशालाले दिने प्रतिवेदनपछि पत्ता लाग्छ । तर, स्थानीय भन्छन्, ‘जस्तो रिपोर्ट आए पनि हामी मान्नेवाला छैनौं । हाम्रो जीवन, खेतीपाती, पशुपक्षीभन्दा ठूलो केही छैन वातावरण बिगार्न पाइँदैन ।’
नेपालमा उद्योग गर्दा यस्ता समस्या आइरन्छन् । त्यसैले सरकारले एउटा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर उद्योगलाई संरक्षण दिनुको साथै स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यको पनि संरक्षण हुने गरी पारदर्शी उपायहरू खोज्नुपर्ने देखिन्छ । उद्योग पनि चल्नुपर्‍यो स्थानीयको मन पनि रमाउनुपर्‍यो । ऐनका अनुसार उद्योग, कारखानाका यन्त्र, सवारीसाधन आदिबाट निष्कासन हुने वा हुनसक्ने प्रदूषण ध्वनि, ताप आदिलाई परीक्षण गराएर सबै कुरा मापदण्डअनुकूल भएपछि मात्र उद्योग चलाउनुपर्छ । त्यसैले इँटा उद्योगहरूले पनि यो ऐनबमोजिम सबै परीक्षणको प्रतिवेदन मापदण्डअनुरूप भएपछि मात्र उद्योग दर्ता अनुमति दिइएको हुन्छ । यदि अहिलेको प्रदूषण प्रतिवेदन खराब छ भने उद्योगपतिले तुरुन्त वातवरण सफा गराउने आधुनिक प्रणाली अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ । तर, उद्योग नै बन्द गर्ने भन्ने माग उपयुक्त हुँदैन ।
वातावरण संरक्षण नियमावली ले जुन मनसायले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्ने भनेको छ त्यस्तो नभएर कानूनी प्रक्रिया पुर्याउन वातावरणविद् तथा अन्य विज्ञको टोली लाई संलग्न नगरी कानूनी प्रक्रिया मात्र मानेर प्रतिवेदन को गुणस्तर वेवास्ता गर्दा समस्या आएको छ। साथै अध्ययन गरेर नकरात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने विधिहरु तथा सकारात्मक प्रभाबहरु वृद्धि गर्ने उपायहरूलाई लागू नगर्दा वातावरणीय अध्ययन कागजमै सीमित हुन पुग्दा अझ यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। यतिसम्मकी सो प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निकायका कर्मचारी ले नै प्रतिवेदन बनाउने गरेको पाइन्छ । यस्तोमा समस्या झन् बल्झिने गरेको छ। सबै उद्योगहरूको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनकाे गुणस्तर नियमन गर्ने र गुणस्तरीय प्रतिवेदनले दिएकाे सुझावहरुलाई लागू गर्ने हो भने वास्तवमा समस्याहरु हल हुने देखिन्छ।
मेराे मुख्य उदेश्य के हाे भने जनता र उद्याेगबीच लेनदेनकाे बार्गेनिङ हुनु भन्दा , मानक मापदण्ड कै अाधारमा वातावरणामैत्री प्रिबधी खाेज्नु राम्राे हुन्छ । अन्यथा इँटा पनि अायात गर्नु पर्ने अवश्था नअाउला भन्न सकिदैन ।